I-Raw MT2 (Melanotan-II) Powder (121062-08-6) Abavelisi-Phcoker
I-Raw MT2 (Melanotan-II) ipowder yi-synthetic cyclic heptapeptide, i-analog ye-alpha-melanotropin (4,10); ndiyakwazi u………
I-MT2 (i-Melanotan-II) i powder (121062-08-6).
I-MT2 (i-Melanotan-II) i powder (121062-08-6) Inkcazelo
I-Melanotan II (MT-2) yi-syntept peptide, i-analog yehomoni yendalo ekhulisa i-melanocortin tan (imveliso ye-melanin ngokusebenzisa i-melanocyte, egqiba kwaye ibangele ukuba yenzeke tan), oko kunciphisa umngcipheko wokulimala kwelanga kunye nokunye. Iziphumo eziyingozi zemitha yelanga kunye nesolarium.
Le peptide MT-2 yenzelwe ukukhuthaza kakhulu impendulo yomzimba kukuvezwa kwe-UV ray, kuba ukuveliswa kwe-melanin kukutsalwa kwelanga okuncinci kakhulu kuyadingeka ukuze kufumaneke umphumo wokutshuka. Esi sisisombululo esifanelekileyo kwabo banesikhumba esifanelekileyo ukuba badinwe ngaphandle kokuchitha iiveki elangeni kwaye baqhubeke nokutsha kunye nenkqubo yokuphilisa.
Abasebenzisi beMT2 banamava okutsala ngokukhawuleza kunye nokuphilisa ngokukhawuleza iiseli zolusu ezonakalisiweyo. Ngenxa yoku, i-melanotan II ilunge ngakumbi kwabo banesikhumba esiluthuthu (uhlobo lolusu 1 & 2) kwaye bathanda ukutshiswa elangeni.
Ngokuphathelele kumthamo we-Melanotan II, inkqubo yolwamkelo esemgangathweni ichaphazela ukuthatha idosi enye yenaliti ye-Melanotan II kwinani le-1 mg (ukubalwa ngqo kwekilogramu nganye akufuneki, njengoko iidosi zahluka ngokubanzi), qala nge-250mkg ngemini nangeentsuku ze4 yongeza enye i-250mkg ngokuthe chu. Ngosuku lwesine yonyusa idosi ukuya kwi-1mg kwaye unamathele kweli nqanaba kude kufezekiswe tan. Iinkcukacha ezithe kratya malunga nokuthenga kukaMelanotan II (MT-2) kwi-intanethi, nceda ungathandabuzi ukuthetha nathi umthengisi we-peptide.
I-MT2 (i-Melanotan-II) i powder (121062-08-6)uqobo
Igama lemveliso I-MT2 (uMelanotan-II)
Igama leKhemikhali IMelanotan II; MelanotanII;
Ukulandelelana Ac-Nle-cyclo (Asp-His-DPhe-Arg-Trp-Lys) -NXXUMX
Iqela leziyobisi Peptide
Inani leCAS 121062-08-6
I molecular Fi-ormula C50H69N15O9
I molecular WSibhozo 1024.198 g / mol
IMasaisotopic Mass 1023.54 g / mol
Ukuxuba Point > 181 ° C (subl.)
Fukuhlaziywa kwakhona Point ≥17.0
I-Biological Half-Life ngeyure 33
Aukuguquka I-Melanotan II i-acetate ityuwa isetyenziselwe ukufundisisa iziphumo zayo zokuvimbela ukunyusa nokunyusa amandla kwinduku.
I-Melanotan II i-Acetic Acid Salt, iyimichiza eyenziwe ngebhabhi efana ne-hormone efumaneka kubantu. I-Melanotan II iboniswe ukuba i-melanogenesis (i-tanning) nemiphumo ye-aphrodisiac kubantu.